Na-ezo aka isiokwu isiokwu iji nweta nọmba ọnụọgụ
Ckingchọgharị SEO ntụgharị site na ekwentị
Sunday, July 11, 2010 Tọzdee, Disemba 18, 2012 Douglas Karr
Obi dị anyị ụtọ na anyị nwere ndị ahịa ọhụụ n'ọnwa a nke na-eme ọrịre ahịa dị ukwuu na mgbasa ozi ọdịnala. Site na redio, telivishọn na ozi nzi ozi, usoro a na-ahụkarị iji nyochaa mkpọsa bụ site na ịnye koodu coupon ma ọ bụ koodu ego ego metụtara kpọmkwem onyinye ahụ.
Agbanyeghị, na azụmaahịa nwere ngalaba inbound telemarketing, usoro bụ isi eji eme ihe bụ ịzụta ụlọ akụ nọmba ekwentị na-enweghị ego ma jiri nọmba ekwentị dị iche iche maka mkpọsa ọ bụla. Nnyocha e mere na nso nso a egosiwo na pasent dị elu nke ndị ọbịa weebụ ga-akpọ kama ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ site na mpempe akwụkwọ ma ọ bụ email (40% na nchọta mpaghara).
Onye ahịa a nwere oke ntanetị na anyị abanyelarị na saịtị ha maka otu isiokwu site na 15% na-erughị ụbọchị 30. Visitsbawanye nleta dị mma, mana anyị kwesịrị inwe ike ịkọwapụta okporo ụzọ gaa na ntụgharị n'ezie. Onye ahia anyi aghaghi ighota na ugwo nke njikarita ihe nchoputa na-agbakwunye dollar na ala. Ihe ngwọta bụ ịlụ di na nwunye abụọ usoro… search engine njikarịcha eduzi kpọmkwem nọmba efu.
Tags: oku na-esochiokunọmba ike ekwentịEkwentị nsochisearch engine njikarịchaA
Daalụ-Blogger! DMCA Mkpesa Mkpesa
Mee Ka Trusttụkwasị Obi Obi Gị Saysị Mba!
Jul 12, 2010 na 8: 11 AM
Doug, Amaara m ụlọ ọrụ nwere naanị otu nọmba ekwentị mana na-agbakwunye "M rịọrọ maka Amy" ma ọ bụ "Jụọ maka Jim" na ntinye nọmba ekwentị ha na-akwụghị ụgwọ. Enweghị Amy ma ọ bụ Jim na ụlọ ọrụ ahụ mana mgbe ha zara ha naanị ha na-ege ntị maka aha ndị mmadụ na-arịọ wee sị na ọ / ọ nọghị ebe a ugbu a mana enwere m ike inyere gị aka. O doro anya na aha ahụ na-egosipụta nke mkpọsa ndị mmadụ na-aza.
Otu ihe ahụ na-arụ ọrụ na mgbatị adịgboroja. Kpoo 800-555-5555 x3542. Onweghi ndọtị 3542 mana ọ na - agwa gị ihe niile ị kwesiri ịma.
Jul 12, 2010 na 10: 34 AM
Anyị na-emebu otu ihe ahụ na Direct Mail, Patric! Anyị na - eji abanye aha na aha ụgha na aha - wee jiri ya soro mkpọsa ahụ ma nye. N'ụbọchị ndị a nke nghọta chọrọ, ejiri m n'aka na a gaghị enwe ekele maka omume a na-ahụkarị ugbu a.
ọrụ aka ọrụ
Jul 14, 2010 na 10: 33 AM
Akwa post Doug. Anyị na-arụ ọrụ dị iche iche nke usoro a: http://www.seoverflow.com/blog/call-tracking/roll-your-own-phone-call-tracking-program-it-is-easy/
nwa oge. Ọ bụ nnukwu ụzọ ma nyere aka gosipụta uru ọ bara ndị ahịa n'ụzọ dị mfe karị. Kwesịrị ịlele edemede ahụ na Twilio maka ndị na-eji nke a n'onwe ha.